Sina 760-7x60W borosy fanasan-damba sy tantely tantely vokany nitondra loha mihetsiketsika amin'ny varotra mafana fanamboarana sy ny orinasa | Mihoatra
760-7x60W borosy fanasan-damba sy tantely tantely vokany nitarika loha mihetsika amin'ny varotra mafana
7x60W loatra fanasan-damba sy tantely tantely nitarina loha loha amin'ny varotra mafana, mitovy tantaran'ny tantaran'ny tantely 19x40w, avy eo nizara famolavolana, vatana, teknolojia vokatra. Tombontsoa 7x60w an'ny masom-by lehibe dia mety hisy vokany tsara kokoa. Ao anatin'ny tontolon'ny setroka tsara dia nilaza mihitsy aza ny mpanjifa sasany fa ny vokan'ny andry tokana dia toa andry 150W. Amin'ny maha-roa amin'ireo vokatra andian-tsarimihetsika lafo vidy mihoatra ny jiro, ny habetsaky ny famokarana isam-bolana dia mety hahatratra 800-1000. Miampy ny volavolainay, ny haitao, ny fanatsarana ny dingana, manana fahamarinan-toerana sy fahombiazana tsara izy ireo. Matetika koa dia amin'ny fandefasana haingana, satria ny ankamaroan'ny fotoana dia mitazona azy ireo hanana tahiry.
7x60W lamba fanasan-damba sy tantely tantely nitaritarika loha amin'ny varotra mafana
Nitarika fifehezana tokana miaraka amin'ny effets pika an-tsarintany, fananganana manankarena amin'ny programa ary maody fantsona 7 DMX mahafeno ny filan'ny fandaharana amin'ny scenario samihafa. Motera telo no manome ny toerana misy azy sy ny fandidiana haingana sy mangina. 33200 lux @ 5M amin'ny zoro tery tery amin'ny 3 degre. Manana traikefa azo ampiharina amin'ny seho an-tsehatra marobe
Loharano maivana 7PCS 60W RGBW 4-IN-1 LED
Fanapahan-kevitra Pan / Tilt
Asehoy: Fampisehoana loko TFT mahatratra 1,8 mirefy 180 ° azo ovaina
Data ao amin'ny foibe / Out Sockets XLR 3-pin & 5-pin
Socket Power PowerCon miditra / mivoaka
Naoty fiarovana IP20
Base Napetraka ny hook hook
LED fanaraha-maso tokana
Vokatry ny makro miloko miavaka
Rafitra optika avo lenta, vokatra voninkazo mahafinaritra miampy zoom
Fiarovana ny mari-pana mitarika & Fan mihazakazaka hafainganam-pandeha mandeha ho azy mifototra amin'ny mari-pana loha
F: Iza amin'ireo no tena varotrao?
RE: Ny ankamaroan'ny vokatra dia namboarinay sy jiro manokana ka noho izany dia manana fivarotana marobe mivarotra mafana eny an-tsena. Miankina amin'ny karazana orinasa sy tsena ifantohanao io. Te hanome anao fahazoan-dàlana bebe kokoa aho raha avelao aho hahafantatra bebe kokoa momba anao.
F: Firy ny mpiasa ao amin'ny ozininao?
RE: Mpiasa 100 eo ho eo hatreto, isan-kerinandro no miala sasatra iray andro, voaofana tsara ny mpiasa rehetra
F: Azoko atao ve ny mahazo ny sary famantarana ny vokatra?
RE: eny, miankina amin'ny habetsahan'ny filaharana
Fanaterana ny ozinina
Teo aloha: 660-6 * 60W Pixels mifehy bara zoom zoom mihetsika loha tsy misy rotationg voafetra
Manaraka: 1940-19 * 40W loha mihetsiketsika be maso mihetsiketsika sy mihodina
Nentina nanasa loha
Nitariho ny lohan'ny loha mandroso
Nitarika hazavana manasa mandroso
Ny jiro fanasan-damban'ny rindrina
Rgb fanasan-drindrina amin'ny rindrina dia nitondra jiro
Hazavana manasa dingana
Jiro fanasana amin'ny lampihazo
Sasao ny lohany mihetsika Mini